प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण आज, ९ बजेदेखि सुरु - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण आज(बुधबार) हुने भएको छ । अहिले बिहान ९ बजे त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौलाको दोस्रोपटक प्रत्यारोपण गरिन लागेको हो ।
उनलाई भान्जी नाता पार्ने समीक्षा संग्रौलाले मिर्गौला दिने तयारी छ । अस्पतालका चिकित्सक प्रा.डा. प्रेम ज्ञवाली नेतृत्वको चिकित्सकको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने तयारी छ ।
उनले भने, “प्रधानमन्त्रीसँग हिजो कसैलाई पनि भेट गर्न दिइएन । आज उहाँको मिर्गौला प्रत्यारोपण शुरु हुन्छ । करिब चारघण्टा लाग्ने अनुमान हामीले गरेका छौं ।”
त्यसैगरी त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भएको बताएको छ ।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. प्रेम कृष्ण खड्गाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यु मिर्गौला प्रत्यारोपण तयारीका लागि यस अस्प्तालमा भर्ना हुनुभएको दोस्रो दिन । उहाँलाई प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक औषधिहरु दिन सुरु गरिएको छ । साथै, विभिन्न विषयका विशेषज्ञहरुबाट उहाँको स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको छ । प्रत्यारोपण अगाडि गरिने नियमित डायलासिस तथा ल्याव परिक्षणहरु गरिने क्रम जारी छ । हालसम्म उहाँको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो अवस्थामा छ र उहाँ विशेषज्ञहरुको निरन्तर निगरानीमा हुनुहुन्छ ।”
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका प्रा.डा. अरुण सायमीले प्रधानमन्त्रीको मनोवल उच्च रहेको जानकारी गराउँदै भने, “प्रधानमन्त्रीज्यू उच्च मनोवलमा हुनुहुन्छ । हामी बरु अलिकति चिन्तित छौं तर उहाँले चिन्ता गर्नुपर्दैन । एकसातामा क्याबिनेट चलाउँछु भन्नुभएको छ ।”